पार्टीले विश्वास गरे मुख्यमन्त्रीका लागि तयार छु - Karobar National Economic Daily
query_builderSeptember 24, 2017 10:22 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility6383
गगन थापा सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सांसद गगन थापा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् । कांग्रेसभित्र वैचारिक, नेतृत्व क्षमता भएका नेताका रूपमा हेरिने थापाको चर्चा नेपालको राजनीतिमा अहिले पनि उस्तै छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा गरेका केही राम्रा नीतिगत निर्णयका कारणले थापाप्रतिको ‘क्रेज’ उस्तै छ । मंसिरमा हुने प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि कांग्रेसले उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न पार्टीभित्र निर्देशन जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री को होला भन्ने चर्चा पनि शुरु भएको छ । देशकै राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नम्बर ३ मा कांग्रेसका तर्फबाट थापालाई मुख्यमन्त्रीको सम्भावित उम्मेदवारको रूपमा समेत हेरिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको अंक गणितलाई हेर्दा यो प्रदेश कांग्रेसका लागि सहज नहुने देखिए पनि पार्टीले विश्वास गरे मुख्यमन्त्रीका लागि तयार रहेको थापा बताउँछन् । उनै थापासँग स्थानीय तह निर्वाचनको प्रदेश २ को आउँदै गरेको परिणाम, त्यसको सन्देश र प्रदेशसभा निर्वाचनका बारेमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानीको सार :
स्थानीय तहको तेसो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नं. २ को मतपरिणाम आइरहेको छ । कसरी हेर्नुभएको मधेसको अभिमतलाई ?
नेपाली कांग्रेसका सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर २ को परिणाम अहिले जे आएको छ, त्योभन्दा अझ राम्रो हुनसक्थ्यो । त्यसो हुनुमा हाम्रा केही व्यवस्थापकीय कमजोरी रहे । योभन्दा अघि सम्पन्न स्थानीय तहकै २ वटा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू असाध्यै ढिलो तय गरेका थियौं ।
यो पटक पनि उम्मेदवार चयन गर्न ढिलो ग¥यौं । कतिपय ठाउँमा हामीले स्थानीय द्वन्द्वलाई हल गर्न सकेनौं । कतिपय ठाउँमा निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्न स्रोत साधानको अभाव पनि भयो । म आफू ७ दिन प्रदेश–२ मै बसेर आएँ । हामीले सांगठनिकरूपमा भन्दा कोसँग हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा छ भन्ने विषयको सन्दर्भमा समेत निर्वाचनको मैदानमा रहेका साथीहरू प्रष्ट नरहेको पाएँ मैले ।
त्यसले के देखाउँछ भने, हामी नियमित रूपमा सम्पर्कमा थियौं । समग्रमा हाम्रो पार्टीप्रति जनताको यति ठूलो अपार विश्वास थियो । नेपाली कांग्रेसले मधेसका लागि ग¥यो भन्ने हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसको लाभ लिन सकेनौं ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने मात्रभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि यो निर्वाचन महत्वपूर्ण थियो । असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलसमेत निर्वाचनमा सहभागी भए । यसले संविधानको स्वीकार्यता बढायो भन्न सकिन्छ ?
निर्वाचनको परिणाम मात्र भन्दा पनि हामी के कुरामा सन्तुष्ट छौं भने हाम्रो पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले कुशलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । यो निर्वाचनले अरु निर्वाचनको ढोका खोल्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको भए कुनै पनि हालतमा मंसिर १० को निर्वाचन हुँदैन थियो । मंसिर १० मा निर्वाचन नहुने हो भने माघ ७ को डेडलाइन जान्थ्यो ।
यसले अरु २ तहको निर्वाचनको सुनिश्चितता गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा जोखिम उठाइएको छ । किनभने जतिबेला हामीले दोस्रो चरणमा निर्वाचन ग¥यौं त्यतिबेलै मिसमास गरेर प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन गर्न खोजेको भए यो निर्वाचन हुँदैनथ्यो ।
नेपाली कांग्रेसले मधेसका लागि ग-यो भन्ने हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसको लाभ लिन सकेनौं ।
त्यो बेलामा हामीले गाली पनि खायौं । कांग्रेसले निर्वाचन गर्दैन । निर्वाचन सार्याे, यो गर्याे त्यो गर्याे भनेर आलोचना भयो । सबै आलोचना सहन, घाटा बेहोर्न तयार भएर पनि हामी निर्वाचनमा लाग्यौं । त्यसो गर्दै गर्दा पहिला हामीले उपेन्द्र यादवलाई ल्यायौं । केही पछि राजेन्द्र महतोलाई ल्यायौं । सबै मधेस केन्द्रित दल निर्वाचनमा सहभागी भए । त्यसकारण हाम्रो लागि त यो अभूतपूर्व सफलता हो ।
६ वटा प्रदेशको परिणाममा अगाडि देखिएको एमाले प्रदेश नम्बर २ मा भने खुम्चिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा एमाले कमजोर देखिनुको कारण के हो भन्ने लाग्छ ?
निर्वाचनको परिणाम भनेको एउटा दलका निम्ति हार्ने जित्ने कुराहरू भइरहन्छ । त्यसैले एउटा निर्वाचनकै परिणामलाई लिएर मैले एउटा दलका बारेमा टिप्पणी गने कुरा उपयुक्त हुँदैन । तर, मलाई के लागेको छ भने म मधेसमै थिएँ । बाराको एउटा उदाहरण दिन्छु, नेकपा एमालेका शीर्ष नेता बाराको सिमरामा आएर चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो । म त्यतिबेला बाराको सिम्रौनगढमा थिएँ ।
सिम्रौनगढमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरूले सम्बोधन गरिरहनुभएको थियो । एकछिन पछि म सिमरा आएँ, सिम्रौनगढका राजपाका नेता सिमरा आउन सक्नुभएन । सिमराका एमाले नेता सिम्रौनगढ जान सक्नुभएन । चुनाव जित्नुभयो । तर, कांग्रेस सिम्रौनगढमा चुनाव जित्यो सिमरामा दोस्रो भयो । आजको दिनमा कांग्रेसको शक्ति भनेको, कांग्रेसले गौरव गर्ने कुरा भनेको हामी सिमरामा पनि छौं, सिम्रौनगढमा पनि छौं । नेपालको आवश्यकता भनेको सिमराको शक्तिशाली हुने अथवा सिम्रौनगढमा शक्तिशाली हुने भन्ने होइन ।
सिमरा र सिम्रौनगढलाई कसले जोड्न सक्छ भन्ने हो । त्यो जोड्नसक्ने तागतचाहीँ न राजपा हो रहेछ न एमालेसँग रहेछ । त्यो जोड्ने तागत भनेकोचाहीँ नेपाली कांग्रेससँग मात्र रहेछ । कहीँ पहिलो भयौं, कहीँ दोस्रो भयौं तर जोड्ने तागत त हामी मात्र रहेछौं । यो चाहीँ सबैभन्दा ठूलो गौरव गर्ने कुरा हो । चुनावमा हारजित सामान्य विषय हो । मुख्य कुरा भनेको नेकपा एमालेले हामी किन सिम्रौनगढ टेक्नै सकेनौं र राजपाले पनि किन हामी सिमरा जानै सकेनौं ? त्यो उहाँहरूले समीक्षा गर्ने विषय हो ।
प्रदेश÷प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । तर, निर्धारित मितिमा चुनाव हुनेमा कतिपयले आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् । तपाईं कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
यसमा कुनै अलमलनै छैन । निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ । त्यसमा मलाई कुनै शंका छैन ।
प्रदेश नम्बर ३ मा कांग्रेसभित्र मुख्यमन्त्रीका रूपमा तपाईंको पनि चर्चा शुरु भएको छ । के तपाई त्यसका लागि तयार हुनुभएकै हो ?
यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक छलफल भएको मलाई थाहा छैन । भर्खर स्थानीय तहकै प्रदेश नम्बर २ को चुनावको सकिएपछि उम्मेदवार सिफारिसका लागि पार्टीले मातहतका तहलाई निर्देशन पठाएको छ । मेरो प्रष्ट कुरा के छ भने पहिलो पटक प्रदेशको चुनावमा जनताले मत हाल्न लागेको हुनाले हाम्रो पार्टीलाई मत हाल्दै गर्दा हाम्रो पार्टीको मुख्यमन्त्री यो हुन्छ भनेर टुंग्याएर जानुपर्छ ।
यसका २ वटा फाइदा हुन्छन् । एउटा त्यो मतदाताको छनोटको आधार हुन्छ, मतदातालाई पनि सजिलो बनाउँछ र पार्टीप्रतिको विश्वास बढाउँछ । रणनीतिक हिसाबले पनि पार्टीलाई फाइदा हुन्छ । त्यसकारण मुख्य कुरा ७ वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ ।
त्यसरी मुख्यमन्त्री तय गर्दैगर्दा प्रदेश ३ को सन्दर्भमा पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा तपाईंलाई अघि सा-यो भने तयार हो ?
त्यो कुराका लागि पार्टी तयार हुने हो र पार्टीले प्रदेश नम्बर ३ मा मुख्यमन्त्रीका रूपमा विश्वास गर्छ भने पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न म तयार छु । एक हिसावले मेरा लागि यो जोखिम नै हो । म त्यो जोखिम उठाउन तयार छु । प्रदेशको निर्वाचनमा आफूले मात्र जितेर हुँदैन । संसद्को निर्वाचनमा आफूले मात्रै जित्दैगर्दा पनि त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ । प्रदेशमा आफूले मात्र जितेर पुग्दैन ।
सबै मधेस केन्द्रित दल निर्वाचनमा सहभागी भए । त्यसकारण हाम्रो लागि त यो अभूतपूर्व सफलता हो ।
पार्टीलाई नै बहुमत ल्याउनसक्ने बनाउनुपर्छ । तर, स्थानीय निर्वाचनको अंक गणित हेर्याे भने देशैभरिमा हामी समस्यामा परेको प्रदेश नम्बर ३ मै हो । तर, यस्तो प्रदेशमा पनि पार्टीले विश्वास गर्छ भने एकप्रकारले यो ठूलो राजनीतिक जोखिम हो । म उठाउन तयार छु । यसको मतलव फेरि मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार म नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । पार्टीले छलफल गरेर जे निर्णय गर्छ त्यसलाई शिरोपर गरेर नै जाने हो ।
संगठनको अवस्था कमजोर देख्दादेख्दै पनि के त्यस्तो सम्भावना देख्नुभएको छ जसकारण तपाईंकै भाषामा भन्दा यो ‘राजनीतिक जोखिम’ मोल्न तयार हुनुहुन्छ ?
पार्टीको सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको संगठन नै हो । त्यसपछि पार्टीप्रतिको जनविश्वास हो । व्यक्तिले गर्ने भनेको १९ लाई २० बनाउनेमात्र हो । मलाई के लाग्छ भने यदि पार्टीले हाम्रो पुस्ताको मान्छेलाई यो जिम्मेवारी दिएर जाँदै गर्दाखेरी हाम्रो पार्टीप्रतिको विश्वास बढ्छ । सबैभन्दा बढी मतदाता कम उमेरका छन् । उनीहरूले हामीलाई नै हेर्दैगर्दा पार्टीभित्र ठाउँ नपाइरहेको देख्छन् ।
त्यसले गर्दा व्यक्तिका समर्थक छन् । तर, त्यसलाई मतमा परिणत गर्न सकिरहेका छैनौं । तर, तिमीले मलाई समर्थन ग¥यौं भने मैले एउटा जिम्मेवारी पाउनसक्छु । त्यसका लागि तिमीले मलाई मत हाल्नुपर्छ भन्ने अवस्था बनाएर गयौं भने त्यसले पार्टीलाई बलियो बनाउन कहीँ न कहीँ योगदान पु¥याउँछ ।
कांग्रेसको विगत हेर्दा अन्तिम समयमा आएर उम्मेदवार तय गर्ने गरेको देखिन्छ । तपाईंले भनेजस्तो मुख्यमन्त्री पहिलै घोषणा गरेरै निर्वाचनमा जाने सम्भावना छ भनेर विगतलाई हेर्दा त भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन नि होइन ?
हामीहरू विगतका कमीकमजोरीबाट सिक्नका लागि सँधै नै तयार हो । प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि जिल्ला जिल्लामा पुगेर आएपछि मुख्य नेतत्वलाई यसो–यसो गरौं भनेर नभनेको होइन । तर, त्यतातिर पटक्कै सुनुवाई भएन । अब कोशिस गर्छौं । म सबै प्रदेश पुगेर आएको छु ।
गाउँगाउँ गएको छु । कहाँ कमजोरी भयो देखेको छु । त्यो भएकाले पार्टीको नेतृत्वलाई त्यो कुरा भन्ने मन छ । आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्ने हो हेरौं के हुन्छ ।
मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा छ भन्दै गर्दा यदि पार्टीले पत्यायो । जनताले अनुमोदन गरे भने के छ तपाईंको योजना ?
प्रदेशको राजनीतिका केही फाइदा छन् । प्रदेशको राजनीतिको सौन्दर्य भनेकै देशैभरि गर्न चाहेको र गर्न नसकेको कुरा प्रदेशको तहमा गर्न सकिन्छ । मसँग योजना छ । नेपालको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? युवालाई अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो परिकल्पना छ ।
नेपालको आवश्यकता भनेको सिमराको शक्तिशाली हुने अथवा सिम्रौनगढमा शक्तिशाली हुने भन्ने होइन । सिमरा र सिम्रौनगढलाई कसले जोड्न सक्छ भन्ने हो ।
प्रदेशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदैगर्दा त्यो कुरा ५ वर्षभित्र गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । ९ महिना मन्त्री हुँदा ३ महिना सिक्दा गयो, ३ महिना आचारसंहिताले गयो । जम्मा ३÷४ महिनाको समय काम गर्न पाएको हो । ५ वर्ष एउटा प्रदेशमा आफ्नो परिकल्पना पूरा गर्न पाएँ भने गर्न सकिन्छ । प्रदेश र अर्को प्रदेशबीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यो भइदिएहुन्थ्यो भन्ने हो ।
सन्दर्भ बदलौं, अहिले शिक्षा ऐन पारित भएसँगै असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा तपाईंले गहनताका साथ विषय उठान गर्नु भएपनि परिणाम फरक आइरहेको छ । यसो हुनुको कारण कतिपयले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीतिसँगै माफियाकरण घुसेर हो भन्छन् नी ?
शिक्षा, स्वास्थयजस्ता विषय नेपालको राजनीतिको मुद्धा कहिल्यै बनेकै छैन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा राजनीतिकरण भयो भन्ने हाम्रो धारणा नै गलत थियो । त्यो कहिल्यै भएन । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय राजनीतिकरण भएको भए त अहिले यस्तो अवस्थानै हुँदैनथ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य राजनीतिक मुद्धा नै भएन । किनभने यसमा लेख्ने, बोल्ने जति छौं हामी कसैलाई पनि सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यसँग कुनै लेनदेन नै छैन ।
हाम्रो लागि छुट्टै अस्पताल छ, विद्यालय छ । त्यसलाई सरकारले गर्ने निर्णयहरू, हामीले बनाउने ऐनहरूले कहिँ पनि छुँदैन । आम जनतालाई मात्र यसले छुन्छ । त्यसैले यसको राजनीतिकरण नै भएन । मैले गर्न खोजेको प्रयास भनेको शिक्षा, स्वास्थ्यको राजनीतिकरण हो ।
यसलाई राजनीतिक मुद्धा बनाउनुप¥यो । अहिले चुनावमा जाने कुनै पनि पार्टीले मेरो पार्टीले प्रष्ट बहुमत ल्यायो भने ५ वर्षभित्रमा नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्यलाई कहाँ पु¥याउँछ ? भन्ने कुरा सेतो कागजमा लेखेर जनतालाई बुझाउन सक्नुछ ।
शिक्षा ऐनमा तपाईंले व्यवस्थापिका संसद्मै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । यसको मुख्य कारणचाहीँ के हो ?
प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक आउनसक्ने कुरालाई सिमित ग¥यो । जस्तो एकछिनलाई मानौं, मैले राखेको संशोधन पास भएको भए ७५ प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउँदै गर्दा अहिलेकै शिक्षकहरू पनि आउने अवस्था पनि हुनसक्थ्यो । तर, राम्रोमध्येको राम्रो शिक्षक भएर आउने अवस्था बन्थ्यो । संख्याको हिसाबले धेरै ठूलो कुरा नहोला । तर, सबभन्दा डरलाग्दो कुरा के हो भने हामीले आन्दोलनमा शिक्षकले माग्नुभएको भन्दा बढी कुरा दिन सरकार तयार भयो । सरकारले दिन्छु भनेको भन्दा पनि अत्यन्तै धेरै कुरा दिनका लागि राजनीतिक दलहरू तयार भए ।
यसो हुँदै गर्दा संसद्ले चुइँक्क पनि नगरी त्यसलाई अनुमोदन गरिदियो । यसले के देखायो ? भोली हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा अहिले ‘पार्ट टाइम’ पढाइरहनुभएका शिक्षकहरू कुनै न पार्टीमा आवद्ध हुनुहुन्छ । हामी स्थायी हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो भने सरकार त दबाबमा काम गर्छ । सरकार भनेको कमजोर हुन्छ । उसले त्यही प्रस्ताव ल्यायो भने पारित हुनेरहेछ । सरकार नचाहिने ल्याउन पाइँदैन भनेर प्रतिरोध हामीले गरेनौं । हामीले मान्दिन भयौं ।
सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्यका विषयहरूमा हामी यसरी कमजोर बन्दै आयौं । त्यसकारण ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो’ भन्नेमा चिन्ताको विषय हो । संसद्को अवमूल्यन त म गर्दिन । कहिलेकाहीँ कस्ता कस्ता विषय संसद्ले रोकेको पनि छ । मलाई डर लागेको कुरा के भने किन शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषय हाम्रो एजेण्डा नै बनेन ।
मैले संसद्मा पनि भनेँ । मेरो बच्चा जनताको छोराछोरी ८२ प्रतिशत पढ्ने विद्यालयमा पर्दैनन् । म त्यसको अभिभावक होइन । त्यो विद्यालय चल्यो चलेन, विग्रियो–विग्रेन, त्यसले मलाई केही नै फरक पार्दैन । म जँचाउन जाने अस्पतालले चिकित्सक आउने, नआउने कुराले केही नै फरक पर्दैन । किनभने म जँचाउन जाने अस्पतालमा पैसा तिरेपछि चिकित्सक पाइहाल्छु ।
कांग्रेस गगन थापा मुख्यमन्त्री केन्द्रीय सदस्य